သင့်အတွက် မနက်ဖြန်: Modem (မော်ဒမ် ဆက်သွယ်ရေးစက်)
Modem (မော်ဒမ် ဆက်သွယ်ရေးစက်)
Modem ဆိုသည်မှာ ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး Internet ချိပ်ဆက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ အခြားComputer တစ်လုံးသို့LAN, WAN, WLAN ချိပ်ဆက်ရာတွင် အသုံးပြုသော ကိရိယာဖြစ်သည်။
Modem. အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ တယ်လီဖုန်းလိုင်းမှလာသော မကိုက်ညီသော signal (Demodulated signal)ကို ကိုက်ညီအောင် (Modulated) လုပ်ပေးခြင်းနှင့် Computerမှ ပို့ လိုက်သော Signalများကို တယ်လီဖုန်းလိုင်းပေါ်တွင် သွားရောက် နိုင်ရန်အတွက် (Demodulated)လုပ်ပေးခြင်းတို့ ကိုdk လုပ်ဆောင် ပေးပါသည်။
Modem. အမြန်နှုန်းကို (bps- Bit Per Second)ဖြင့် တိုင်းပါသည်။
ယနေ့ ယျေဘုံယျ တွေ့ ရှိမှု Modemများ. အမြန်နှုန်းမှာ 56 Kilo bps, 28.8 Mega bps (dial-up modem)ရှိပြီး 512 Mega bps, 1 Giga bps (ADSL)များကို တွေ့ ရှိရပါသည်။